Mieritrereta ary manankarena - Napoleon Hill (PDF) - AFRIKHEPRI
Mipetraha ary manankarena - Napoleon Hill (PDF)
Tsy maina ny mainty hoditra: manao ahoana ny taonany raha tsy mitaingina?
zoma, 29 may 2020
Veny an-tananao ny iray amin'ireo boky mahery indrindra eto an-tany. Ity boky ity dia manambara ny drafitra narahin'ireo izay nahazo tombony. Ianao koa dia hanaraka azy io, mianatra avy amin'ny pejy ka hatrany amin'ny pejy ny hahafahanao mampihatra izany avy hatrany. Inona no mahatonga ny lehilahy iray handroso haingana eo amin'ny fiainana, hahazoana vola, hampitombo ny entana, ho sambatra rehefa tsy misy hafa aza afaka manomboka? Inona no mamela ny lehilahy hanana fahefana manokana, nefa ny iray tsy manan-kery? Inona no mamela ny olona hamaha ny olany ary ho hitanao foana na dia eo aza ny sakantsakana amin'ny fiainana, ny lalana mankany amin'ny fanatanterahana ny nofiny, fa ny sasany kosa miady, tsy mahomby ary tsy mahomby na inona na inona?
Taona maro lasa izay, Andrew Carnegie, izay iray amin'ireo manankarena indrindra eto an-tany, dia nanomboka an'i Napoleon Hill ho ao amin'ilay tsiambaratelo lehibe. Nanome torolàlana azy izy mba tsy hahitana ny fahombiazan'ny olona mampiasa izany, fa ny fandalinana koa ny fomba ary entin'izy ireo hiaraka ho iray homena an'izao tontolo izao. Izy no ho drafitra.
Saintsaino sy lasa manankarena dia manambara io tsiambaratelo io ka manome anao ity tetika ity. Navoaka tamin'ny 1937 ny boky ary nanomboka tato 42 dia navoaka. Ity farany izay nohavaozina dia misy singa vaovao maro mety hanampy ny fahatakarana ny asa, ao anatin'izany ny tsipika famaranana izay mamintina ny toko tsirairay. Ho fantatrao ny hany fomba ahafahana mandresy ny sakana rehetra, manome fahafaham-po ny finiavana ary loharanom-pahombiazana tsy azo ihodivirana.
Ity boky ity dia manam-pahefana hanova ny fiainanao. Tsy ho ela dia hahafantatra ny antony sy ny fomba hananan'ny olona sasany manankarena satria iray amin'izy ireo ianao.
Mieritrereta sy manankarena / Mihevera ary manankarena [Nadika]
4,99€ ao amin'ny staoky
1 vaovao manomboka amin'ny 4,99 €
tamin'ny 28 Mey 2020 7:29
Vokatra ve ny olon-dehibe
Daty namoahana 2012-06-04T00:00:00.000Z
Isan'ny Pages 288
Publication Date 2012-06-04T00:00:00.000Z
Format Boky kely
Manompo ny mahaolona - Alice Bailey (PDF)
Ny làlana tonga lafatra na ny Esoteric Christ (PDF)
Ny fanatrarana ny fahamasinana - Eckhart Tollé (Audio)